Jose mourinho oo helay shaqo cusub .tolow maxey tahay? – Gool FM
(champions leage ) 11 Feb 2019 Macalinkii hore ee kooxda Manchester united Jose Mourinho ayaa marti ku noqon doono barnaamij lowga hadlayo falanqeenta kulamada champions league sida la xaqiijiyey .
Mourinho ayaa laga raaca deyey shaqada kooxda United bishii December tan iyo waqtigaa macalinka ayaan wax shaqo loo caleemo saarin .
Mourinho ayaa ka dhex muuqday koobkii aduunka ee lagu soo xiray Mascow waxa uu ahaa falanqeeye dhaman kulamdii ugu weynaa ee dhacadada waxa uuna ka howlgalayey Tv Ruushka laga lee yahay oo la maga caabo RT.
Bayaan ka soo baxay isla muuq baahiyaha RT oo ay wadashaqeen hagagsan ay wada dhexmarta macalin Jose ayaa lagu sheegay.
” showgeena waxaa ku soo biiri doono macalinka portugal oo ka qeeb qaadan doona falanqeenta kulamada Champions league dhamaan asbuuca , inaga oo xitaa wax ka weydiin doona dhacdooyinka ugu weyn kubada cagta ”
Waxaa kale oo la raaciyey qoraalka ka soo baxay Tv shaqada macalinka ee falanqeenta ayaa bilaaban doonta kulanka ugu horeeya ee wareega 16- ilaama 1-june oo ah finalka tartanka champuons league .
Ma ahan markii ugu horeysay ee uu jose ka soo muuqan doono shaashada waxaa lagu casuumay hilinka caanka ah ee beIN Sport tan iyo markii laga ceyriyey shaqadii uu ka hayey garoonka Old traford.